トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Fa ny olona izay te-mandanjalanja eo amin'ny ambim-bavany, fametrahana modely sy ny modely fanahafana ny pachinko trano izy
Ianao, aho, dia ho any amin'ny pachinko efi-trano, heveriko fa ny fisafidianana ny lalao modely mijery ny fivarotana manontolo voalohany. Noho izany, raha miezaka ny handresy izany, na tokony milalao Na izany na tsy modely, fivarotana na modely Mix dia mbola hijery ny fomba tsara. Pachinko fivarotana, fa ireo fitaovana amin'ny modely isan-karazany, ny anjara izay tiako ho ny tsara indrindra dia ny fandraisana ho mpikambana hira lehibe mety.
izao, pachinko roa slot, satria ny gazety nivoaka be, miezaka hijery alohan'ny handeha hilalao.
jackpot mety ho
pachinko, avy amin'ny lehibe hira mety dia voalaza fa avo-spec modely avo, isan-karazany mandra-modely ny ambany azo inoana izay nanao tamin'i Dejihane. Fa ny slot, araka ny toe-javatra, misy azo inoana izay antsoina hoe ny mekanika fivakisana.
izay tianao inona no karazana fomba hilalao, dia ho samy hafa ny modely hifidy mivoaka, soso-kevitra mety tsara indrindra ho Pachinko dia modely izay voalaza fa karazana specs afovoany. Afovoany karazana fepetra arahana, ho amin'ny toerana-kafa ny jackpot mety ho avo-spec sy Dejihane.
Dejihane ampy, fa tsy misy mora ny voa, toy ny avo-spec, na dia mafy anjara andevozin'ny izany, fa ny tiako lazaina ihany koa ny fampiasam-bola tsy efa, mandresy Antenaina koa ao amin'ny pachinko. Izany dia fandresena lehibe izany tamin'izy ireo, raha avo-spec no soso-kevitra, fa satria lehibe mampiankin-doha ihany koa, ka mety ny fampiasam-bola lehibe miakatra mamontsina, koa tsy maintsy vonona ny faharesena lehibe.
Dejihane koa ka niteny, dia hilentika jackpot avy hatrany, fa ny kely na payout dia tsara raha mba ho lalao, dia tsy mety raha te handresy.
Ny lalana, ny slot dia efa nametraka 1 ny latabatra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko. Misy ihany koa ny sitrapony rehefa kafa ihany koa ny toe-javatra niditra fiara maro mba hanehoana ny baolina avy, fa ny mametraka 6, mihevitra aho fa tsara kokoa ny kely nieritreritra aho niditra tao amin'ny raharaham-barotra ara-dal?na.
Noho izany, ny saina no nizara ny milina ao amin'ny raharaha fametrahana 1. Ny akaiky kokoa ny milina nanendrena 100 isan-jato ny napetraka 1, dia ho mora kokoa ny misintona ny fampiasam-bola dia tsy vola tombony. Ankoatra ny slot, A T milina sy ny ART milina sy ny milina ara-dal?na, na ny toy izany, dia tonga koa ny maha samy hafa ny famaritana. Ny milina ara-dal?na, eny, nifoha ireo izay manana asa RT, milina raraka ny an-dalana ny misy nametraka 1, misy fironana ny somary ambony kokoa.
for beginners dia, milina ara-dal?na dia tsy famaritana ny RT, sns tsy misy tsehatra ara-teknika toy ny hanoto maso ny soso-kevitra. Pachinko slot roa, nefa tsy misy fomba azo antoka fa toy ny handresy, tsy mila fampiasam-bola, dia zava-dehibe ny mifidy ny lalao mora mba hanahafana Fandresena andrasana ihany koa. Avy teo amin'ny
hilalao mora ny modely, mamaky ny alon-milina ao amin'ny tahirin-kevitra jiro, ary mamaritra ny olona vola, koa izany no hampitombo ny fandresena isan-jato noho ny milalao an-jambany. Ary rehefa afaka izany, sy ny modely izay efa nandresy teo aloha, raha voafidy Avia ny modely izay te-hilalao aho, mihevitra aho fa na tsy hankafy kokoa ny pachinko.
Raha te misy slingshot, mifidy ny fivarotana fametrahana ny karazana specs afovoany matetika, eo amin'ny tranga izay ny slot, fidio ny fivarotana nametraka 1 amin'ny milina nizara maro ireo modely manakaiky ny 100%, nankafy modely isan-karazany Mba jereo in.
mba handresy koa dia zava-dehibe, fa ny fitaka fa ny any amin'ny mainty mizana tsy very intsony. Raha toa ianao ka mandroso mpampiasa, manantena aho na dia mikendry ny avo-spec fikarakarana bebe kokoa, ny olona izay te ho soa ny fotoana maha-mandanjalanja, dia soso-kevitra fa ianao mandeha momba ny foto-kevitra fa tsy very mihoatra noho ny fandresena. Ary hatramin'izay modely izay nandresy teo aloha, raha voafidy Avia ny modely izay te-hilalao aho, heveriko fa ho bebe kokoa hanana ny pachinko.
mba handresy koa dia zava-dehibe, fa ny fitaka fa ny any amin'ny mainty mizana tsy very intsony. Raha toa ianao ka mandroso mpampiasa, manantena aho na dia mikendry ny avo-spec fikarakarana bebe kokoa, ny olona izay te ho soa ny fotoana maha-mandanjalanja, dia soso-kevitra fa ianao mandeha momba ny foto-kevitra fa tsy very mihoatra noho ny fandresena.